3 Cabitaan Oo Gaaska Daaweeya - Daryeel Magazine
3 Cabitaan Oo Gaaska Daaweeya
Gaaska waa xanuun badanaa Somaalida aad uga sheegato, wuxuu ku dhacaa caloosha, Waana caabuq diiqa, ama boog ku timaadda dahaarka caloosha. Waxaa uu u noqon karaa mid si degdeg ah u dhaca (acute) iyo mid dabadheeraada (chronic).
Sababaha keena xanuunkaan waxaa ka mid ah welwelka badan, isticmaalka alcohol-ka, vitamin B12 la’aan, gaajada badan, cuntada basbaasku ku badanyahay (spicy) iyo isticmaalka daawooyinka layiraahdo anti-inflammatory drug sida asprin ta.
Si aad iskaga daawayso waxaan kugula talinaynaa inaad la tashato dhakhtar maadama Gastritis-gu sababi karo nabro ku samaysma caloosha.
Talada dhakhtarka ka sakoow waxaa jira waxyaabo badan oo dabiici ah oo aad jikadaada ku samaysan kartid isla markaana kaa daawayn kara gaaska.
Waxaa ka mid ah waxyaabahaan aad isku dayi kartid cabitaanaadaan hoos ku xusan
Waxaa in badan la ogaaday in liindhanaanta huruuda ah ayaa caawiso gaaska.
Cab biyaha liin dhanaanta maalin kasta
Yogurt iyo moos:
Caanaha garoorka ah ee yogurt-ka loo yaqaan waxay ka mid yihiin cuntooyinka ay haboontahay in badsatid hadii aad ka mid tahay dadka qaba gaaska. Caanahaan waxay xoojiyaan habdhiska difaac jirka ee cudurrada waxayna la dagaalamaan bakteeriyada H. Pylori ee sababta gaaska.
Isku qaso koob caanaha yogurt-ka ah, 1 xabo oo moos ah iyo 1 qaado oo malab ah. Cab 2 ilaa 3 goor maalintii inta aad iska dareemaysid natiijo ku raali gelisa.
Sanjabiishu runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha sida Sunnada ah layskugu daweeyo. Waana daawooyinka uugu faa’iidada badan waxyaabaha dabiiciga. waxaa ku jira maadooyin la dagaalama caabuqa iyo bakteeriyada, sidoo kalana infakshanka daaweeya sida labalada, dibirada iyo gaaska.
Waxaad isku darsataa 1 qaado oo sanjabiil qoyan ah oo la jarjaray kadibna biyo ku karkari mudo 10 daqiiqo ah, malab ku darso. Cab 2 goor maalintii mudo asbuuc ah.
Cuntooyinka Daaweeya Lalabada ( Yalaalugada) Canjeeladu/Laxooxdu Ma Sababta Gaaska Caloosha? Dawooyinka Gaaska Loo Cuno, Khatartooda Caafimaad Ayaa Ka Badan Waxtarkooda Faaidooyinka Huruuda Iyo Sida Cabitaan Looga Sameeyo